Ngeli xesha, inkulumo ethi "isidlo sothando" idibene neendleko, iintyatyambo, ivenkile kunye nomculo ophuzileyo, ikhandlela kunye nobumnyama obumnyama. Akungabazeki ukuba isidlo sakusihlwa esimnandi esenza umtshato, apho abantu bazive bekhange kakhulu. Kodwa le myalelo sele idinwe kwaye ndifuna enye inothando. Izinketho zomhla wokuthandana zifunekayo ukufumana iimvakalelo ezintsha. Cinga ezinye iindlela zokwenza isidlo sakusasa.
Ziziphi iindlela ezindikhethayo ukuze ndibe nesidlo sothando
Ukudibanisa iintlanganiso zakho kuya kunceda ipikniknic. Oku kuyindlela enhle, ngakumbi ukuba uhlala kude nxweme. Unokuthabatha ukutya okulula, iitrato kunye newayini kunye nezibuko. Emoyeni apho amaza olwandle ahamba khona, ebukela ukutshona kwelanga, unokuthetha ngokukhululekileyo kunye nomoya osondeleyo. Kwakhona, ipikiniki inokulungiswa naphi na, ingaba lihlathi, i-echibi, umlambo wamanzi, njl njl. Ukuze udle isidlo sothando, ungaqeshisa indlu kuyo nayiphi na indawo yolonwabo kwaye kwindawo entsha, uhlale unomxholo wokuthandana.
Ukuba intombazana yakho ithanda ukuphumla okusebenzayo, ngoko unokuchitha ixesha lokuhlwa kwiqela, tyelela iindawo zokuzonwabisa, uye kwi-ice rink, uze uhambe ngesitya. Emva koko, ungaya kwikhafefe, apho ubeka khona itafile ngaphambili. Oku kuya kuba kukumangaliswa kumhlobo wakho.
Ukutya isidlo ekukhanyeni kwenyanga kunokulungiswa ekhaya kwi-veranda, okanye kwibhontoni (ukuba ibhakoni inkulu ngokwaneleyo). Ukutya okunjalo kulungile xa kukho iinkwenkwezi ezininzi esibhakabhakeni. Iwayini elikhanyayo, umculo omnandi kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi kuza kwenza umoya onothando ngokwenene.
Kungekudala, ukuhamba kwiibhaluni kuyathandwa kakhulu. Kuwe ngeenqwelo-moya ungathatha i-champagne kunye neziqhamo kunye neesekese. Olu hlobo uhambo lwakho luya kukhunjulwa ixesha elide, kuba le ndlela yokuthandana yinto yokuqala.
Isipho esihle kumfazi wakho uya kuba sisidlo esikebheni, apho baya kukunyamekela ukukhonza kwetafile yakho kwangaphambili.
Ekhaya, unokufumana isidlo sothando kuphela. Umzekelo, hlamba indlu kunye ne-rose petals, lungisa i-candlelit dinner okumnandi, ukhanyise ikhandlela elimnandi. Gcwalisa ibhafu kunye neepalesi ze-rose. Kulo ntombi yakho, isidlo esithandanayo sothando siya kuba mnandi.
Kwakhona, isidlo sangomlambo siya kuba semvelaphi, ukuba, ngokuqinisekileyo, iindlela zivumela. Emva kokutyelela kwi-theatre okanye kwindawo yokudlela yase-chic, apho ubeka khona ngaphambili itafile ezimbini. Kwi-limousine unako ukusela iglasi ye-champagne. Abasetyhini abaninzi baya kuvuyela isiphakamiso esinjalo.
Ungayilungisa njani enye indlela yokutya ngesidlo sakusasa
Isidlo sangokuhlwa esinokuthandana nesidlo esinokusichitha esidodini. Akubi, ukuba idama lihlala endlwini yakho okanye kwilizwe. Ukuba akunjalo, ungasebenzisa i-sauna ehlawulwe kunye nedama lokubhukuda. Esikhundleni sezitulo kulungile ukusebenzisa izithambisi ezinobulunga okanye izangqa. Itheyibhile inokuhanjiswa ngokuthe ngqo kwicala. Kule meko kulungile ukudala ukukhanya okulula kunye nomculo "othakazelisayo".
Unokukhetha ukuba udle lomtshato kwiphahla. Inomdla ngokwenene. Ukwenza oku, lungiselela eluphahleni itafile ejikelezileyo kunye nesitrato esihle, ulungiselele iwayini elikhanyayo. Ukuba kunokwenzeka, ke unakekele ukukhanya kunye nomculo olula. Lungiselela ukutya okulula, iziqhamo, iiskese ukuze ziziswe ngokukhawuleza kwiitya. Kuya kukukholisa intombi yakho.
Musa ukulibala ukuba isidlo esithandwa kakhulu sisidlo sakusihlwa kunye ne-strawberries kunye ne-champagne. Le nhlanganisela ayinakwenzeka kwiintlanganiso zothando. Sebenzisa le "intsebenziswano" ingaba nayiphi na intlanganiso yothando.
Izinketho zokutya ngeesibini zingahluka. Yaye khumbula, kungakhathaliseki ukuba ukhetho olunikela lakho iqabane, ziinkcukacha zentlangano ebaluleke kakhulu kubusuku obuhle. Imvakalelo yakho, iimvakalelo kufuneka zibe phezulu. Kuxhomekeke kuwe impumelelo yehobusuku, ngokuziphatha kwakho.
Kwaye enye ingongoma ebalulekileyo kukuba imenyu yesidlo sothando kufuneka yenziwe ngokuqwalasela inkcazo yomibini kunye neemeko. Ukuba umenywa umfazi ukuba adle ngokusuka emsebenzini, ke qiniseka ukuba imenyu i-caloric, xa iqabane lakho limenywa ukusuka ekhaya, ngoko unakekele izitya zokutya ezimnandi ozithandayo zombini.
Ngaba kukho uthando lomzimba?
Kungcono ukhethe uthando okanye umsebenzi?
Ungayilahla njani uthando kumntu, ukuba akayithandi?
Uthando luyinto embi
Impembelelo yoqhagamshelwano nophuhliso lomntu
Ukuhlambalaza ukucoceka ngokujulile kwesikhumba
Indlela yokusebenzisa iibhotile zeengcobo ezingenanto
I-tshokoleta unamathele ngama-raspberries
Iipilisi zonyango zezempilo kunye nobuhle
Ukuxhatshazwa ngokwesondo kunye namadoda apheleleyo
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - i-Aquarius yabesifazane-ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Ungayifumana njani umntu ekudleni?
Indlela yokwenza iimasta zamastadi zokukhula kweenwele?